Indawo yokuphola eselunxwemeni - I-Airbnb
Indawo yokuphola eselunxwemeni
Ifakwe kwindawo yabucala, iflethi okanye indlu ekwicomplex yindawo yeholide ekumgangatho ophezulu efama kufutshane neCarrickalinga Beach, nokuzingenela. Yonwabela umlilo wamaplanga neglasi yewayini ebomvu, okanye wonwabele ibhafu esimahla uze wonwabele ulwandle. Le yindawo efanelekileyo yokuphumla yezibini ezinegumbi lokulala elikhulu negumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elahlukileyo kunye nekhitshi elincinci kunye nomgangatho wabucala kunye ne-BBQ yakho. Sine-wifi yesatellite, i-aircon, ithabhlethi eneemuvi. Sinikezela ngewayini nesidlo sakusasa sasimahla.
Ukubaleka, kodwa kusekho imizuzu eyi-5 kuphela xa usuka eCarrickalinga Beach, evotelwe eyona nto imnandi ngePlanethi yaseMzantsi Afrika. Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex zimiselwe kakuhle kakhulu ibe zenza kube mnandi ukubona iindawo ezintle ezisemaphandleni nonxweme oluhle lweFlelidayu. Yonwabela ifriji yakho yewayini enezona ndawo zintle zaseMzantsi Ostreliya, kuquka ibhotile yewayini ekumgangatho ophezulu yeMcLaren Vale, ukuze uzinze. Amagumbi okuhlambela amiswe kakuhle aneebhafu zesiNgesi ezizimeleyo, ukuze zikuncede uhlale kamnandi uze uzipholele. Iibhedi ezinkulu ezithi ndijonge kunye nendawo yakho yokuhlala. Sinikezela ngesonka sasekuhlaleni kunye nesidlo sakusasa esincinci kunye nomgangatho omhle ojikelezayo kwinto onokuyonwabela. Ukukhetha ukuhlala kwaye ungcamle ingqokelela yewayini emangalisayo, imveliso yengingqi kunye negumbi elimiswe kakuhle okanye uphume uze ugcakamele ukutya okumnandi, iwayini kunye nendalo yeMcLaren Vale akuyonto ilula. Ukuhlala iintsuku eziliqela nokwenza zombini yeyona ndlela!
4.95 · Izimvo eziyi-105
Indawo engummelwane idibanisa iindawo ezintle ezisemaphandleni, indalo ekumgangatho wehlabathi, i- kangaroos ezininzi kunye nonxweme olubukekayo. Iilwandle ezimbini eziphambili zaseFlelidayu ziphakathi kwemizuzu eyi-5 xa uqhuba - iCarrickalinga kunye ne-Myponga Beaches. I-McLaren Vale, enye yezona ndawo zewayini zidumileyo zaseMzantsi Afrika ikumgama wemizuzu eyi-25. Ibala legalufu elihamba phambili leentshatsheli, iilinki zeLady Bay, yimizuzu eyi-10 xa uqhuba. Ipaki yelizwe i-Deep Creek, ejongene nesiqithi saseKangaroo kwaye inendawo yokuqala ye-Heysen Walk trail ikumgama wemizuzu eyi-30. Ukutya okuqala kwi-Fork Tree Brewing enokutya okumnandi kunye neendawo ezintle onokuzibona, kunye nemizuzu eyi-3 kuphela xa uhamba ngemoto ukusuka kwindawo yokuhlala, kwaye kukho ne-Little Little e-Normanville, ivenkile yokutyela entle kunye ne-pizzeria ekumgama wemizuzu eyi-8 kuphela. Sineendlela eziqhelekileyo onokukhetha kuzo ezifana neYankallila Pub kunye ne-resort e-Lady Bay, ukuya kutsho ekutyeni okudumileyo kwingingqi yaseGrisi ePort Willunga naseLeonards Mill, iSecond Valley. Ukuba uyathanda unxweme, indalo, ukutya newayini zonke zisemnyango.
NjengaBabuki Zindwendwe Abaphum 'Izandla sifuna iindwendwe zethu zibone "ingingqi yethu", ngoko simisele iCoast & Co., inkampani yezokhenketho ejongene nokubonisa iFlelidayu Peninsula kunye neMcLaren Vale. Unxweme & Co yinkampani yezokhenketho kwabo bafuna ukuphuma kumzila wabakhenkethi. Kumalunga nokuhamba-hamba kwindawo ebiyelweyo nokuya kwindawo engatshintshwanga kwaye ungothuki ukuze udibanise ne-4WD, i-E-Bike, i-helicopter okanye iinyawo zakho ezimbini! Ukuba ukulungele ukujonga iFleprice} u Peninsula njengengingqi nje yewayini emnandi, ngoko unxweme neCo yeyakho.
Unxweme kunye neCo lukunika ukhenketho losuku oluthatha ezona ndawo zintle kunxweme lweFleprice} u nayo yonke into ephuma kuyo. Iklasi yehlabathi yendalo, izilwanyana zasendle ezimangalisayo, iminyango yendawo yokuhlala edumileyo kunye nokutya okumnandi kunye nemveliso kwiphondo. Zisondelelene, unxweme & Co aluthathi ngaphezu kweendwendwe ezintandathu ngobhukisho ngalunye ibe lusemva kokutya okumnandi, iwayini nendalo eMzantsi Ostreliya. Khangela nje unxweme kunye neCo Willunga ukuze ufumane ukhenketho lwethu.
Ukongezelela kukhenketho lwethu lokuqhuba siye sazisa ngeebhayisekile zombane zasezintabeni eMcLaren Vale ngokubambisana nePrimo Estate. Ukuziqesha nokutyelela iintlobo ngeentlobo zeminyango kunye neevenkile zokutyela kwi-Shiraz Trail nge- $ 95 kuphela umntu ohamba ngebhayisekile yakho kunye nepakethi yangasemva egcwele zizinto ezintle zasekuhlaleni, okanye uthathe uhambo olukhokelwayo nge- $ 20 kuphela, ekunika iminyango eyi-4 kunye nesidlo sasemini kwi-Red Poles okanye kwi-Wirra Wirra. Kwiindwendwe zethu zendawo yokuhlala sinikezela ngesaphulelo seepesenti ezilishumi kula maxabiso okubhukisha ngokuthe ngqo.
Ukhenketho Olukhokelwa Ngeebhayisekile Zombane luthatha ezi zinto zilandelayo:
Uza kuya emva kwemimandla yeendawo zewayini ezidumileyo uze ukwazi ukungena kolu hambo kwaye akukho mntu utyelela ibhayisekile yombane kumzila we-McLaren Vale 's Shiraz. Uza kufumana ukhenketho lweendawo zewayini ezisebenzayo eSamson Tall, ezingafumaneki ngokuqhelekileyo ebantwini, kodwa siyivulele kumnikazi nomntu owenza iwayini, naye ongumhlobo. Oku kukuvumela ukuba ufunde ngokwenza iwayini encinci. E-Wirra Wirra uza kubona iiseli zembali ze-ironstone kwaye ungcamle ezona zakhiwo zidumileyo zalo mmandla. Kwi-Red Poles uza kutyelela umboniso okhethekileyo wobugcisa bomthonyama kwigalari, uze ufumane isidlo sasemini esimnandi esineglasi yewayini ekumgangatho ophezulu okanye iibhiya ezahlukahlukeneyo onokuzizama. E-Hugh Hamilton, lungiselela ukubeka amehlo akho, iindlebe, iminwe, impumlo kunye nokungcamla izinto ezigqamileyo xa umntu ozinikeleyo ekuthatha uhambo lwewayini yabo. E-Primo Estate, uza kufunda ngembali yase-Itali yalo mmandla uze uzame iwayini ekhuthazwayo yaseMediterranean. Yonke i-ethos kukuya emva kwezinto ezibukhali kwiindawo eziyi-5 ezidumileyo kwaye udibane nenkampani esiyigcinayo.
Bona ukhenketho lwethu Kwizinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb uMcLaren Vale okanye ukhangele nje iCo Coast and Co Willunga.
Iindwendwe zinikwa iinkcukacha ezilula zokuzingenela kwangaphambili. Ngokuqhelekileyo sidibanisa ixesha lethu phakathi kwendlu kunye nendlu yethu ephambili eMcLaren Vale. Siyazihlonipha izinto eziyimfihlo kodwa asikaze sikude kakhulu ukuba iindwendwe zidinga uncedo.
Iindwendwe zinikwa iinkcukacha ezilula zokuzingenela kwangaphambili. Ngokuqhelekileyo sidibanisa ixesha lethu phakathi kwendlu kunye nendlu yethu ephambili eMcLaren Vale. Siyazihlo…